आज साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, फेरि संसद् विघटनको लागि सिफारिश गर्ने तयारी ? - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार आज साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, फेरि संसद् विघटनको लागि सिफारिश गर्ने तयारी...
आज साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, फेरि संसद् विघटनको लागि सिफारिश गर्ने तयारी ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत पूनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेगरि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने तयारी गरेका छन् । संसदमा विश्वासको मत पनि नपाएको र वैकल्पिक सरकार पनि बन्ने आधार नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नसक्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेका थिए । तर, संसद बैठक लम्बिएको कारण मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न केही ढिला हुने बुझिएको छ । कांग्रेसनिकट अधिवक्ता केशबराज जोशीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको लागि प्रधानमन्त्रीले आजै सिफारिश गर्नसक्ने सम्भावना औंल्याए ।
यद्धपी प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा आफूले विश्वासको मत प्राप्त नगरे मार्गप्रशस्त गर्ने प्रतिबद्धतता जनाएका थिए । उता, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने र अब संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
Previous article७ सांसदले जस्ले छाडे खनाल–नेपालको साथ, हाले ओलीलाई बिश्वासको मत
Next article‘अमेरिकन आइडल’को टप ७ बाट बाहिरिए दिवेश
८ वर्षीया छोरी बलात्कार गरेको आरोपमा एक पुरुष पक्राउ